Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay dagaal maleeshiyo xoolo dhaqato ah ku dhexmaray deegaan u dhow tuulada Bali Busle ee gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay dagaal maleeshiyo xoolo dhaqato ah ku dhexmaray deegaan u dhow tuulada Bali Busle ee gobolka Mudug
September 5, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Ugu yaraan shan qof oo ku dhintay dagaal maleeshiyaad xoolo dhaqato ah ku dhexmaray deehaan u dhow Balis Busle.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaal maleeshiyo beeleed xoolo dhaqato ah ku dhexmaray deegaan u dhow tuulada Bali Busle ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka oo u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo kasoo jeeda Puntland iyo Galmudug ayaa ka dhacay deegaanka Docolo Ooman oo u dhow tuulada Bali Busle.
Sida ay wararku sheegayaan dagaalka ayaa ku lug leh aanooyin qabiil oo u dhaxeeya labada dhinac ee dagaalamay.
Dagaalada ku lugta leh aanooyinka qabiilka iyo muranka ka dhasha deegaan daaqsimeedka ayaa mar walba kusoo noqda deegaanadaas.